Tsy vitan’ny kabary sy fivoriana ny tolona fa mila asa… – MyDago.com aime Madagascar
Tsy vitan’ny kabary sy fivoriana ny tolona fa mila asa…
Entinay aminao ireto ny tatitra fohy ny kabary tetsy an-kianjan’ny Magro androany :
Michèle (association pro-Ravalomanana) : tsy vitan’ ny mamim-bahoaka i Ravalomanana fa na tsy eto an-toerana ary izy amin’izao fotoana izao dia tsy manandino azy ny vahoaka noho ny zavatra vitany.
Ny tapaka tany Sandton no ekena hatreto hoy izy. Ny Sadc no nanome fahefana ny Troika ka io Troika io ve i Simao ? Mody tsy misy fepetra ihany ny filoha Ravalomanana hoy hatrany izy raha nikabary.
Berthine : miady an-trano mivantana ny FAT. Sitrapon’i Simao no nandehany taty fa tsy amin’ny anaran’ny Sadc.
Rabarisambo : Gaborone tanteraho, Sandton izao dia izao. Mila miray hina isika noho izany ary sahia mijoro, ampitombona hatrany ny isa.
Atao takalonaina ny ankizy ankehitriny raha tsy voaloha ny ecolage dia tsy mahazo convocation fanandinam-panjakana, tsy misy zo mihitsy ny malagasy.
Guy Roger : mbola tsy nivoaka indray i Jules fa misy zavatra hafa ampagaina azy indray. Avoahay tsy misy fepetra ny namanay rehetra fa tsy meloka ireny ary izahay koa tsy matahotra ny raharaha 7 febroary izany satria madio tanana i Ravalomanana.
Ry Voninahitsy, masoivoho 12 ve no lazainareo fa nahazoana fankatoavana iraisam-pirenena nefa dia olona mpiray business ? Miverina Ravalomanana ary izahay koa tsy hangina raha tsy lany indray izy.
Ramy : nandalo teto daholo ny niteny hoe na hiposaka avy any andrefana aza ny masoandro, tratra ialahy, izay mivadika aloha kely ila…aiza ireo ? Ka mila olona hendry sy manana fahaizana manao ny firenena. Tsy vita ny kabary sy fivoriana ny tolona fa mila asa. Finoana arahana asa.
Tsy harena na ny hoavin’ ny taranany no mahahory an’i Ravalomanana fa ny tanindrazany.
Doc Julien : efa hatramin’ny fitondran’i Zafy ianao ry Victor Manantsoa no nanota fady tahak’izao. Aza mandiha tsy afaka tavony ianao satria sady tsy HPM ianao no manaovana aloha referendaoma amin’ny tenenao any Bekily.
Izay tapaka dia tapaka fa hafa i Andry manao sonia dia tsy manatanteraka.
Ramarokoto : mitombina mihitsy ankehitriny ny teny hoe ory havamanana ny malagasy. Toetra nolovain’ny malagasy tamin’ny mpanjanaka izany, zarazarao hanjakana, tsy misy fihavanana fa samy maka ho azy.
Tsy azo ohanina ara-bakiteny tokoa ny lalana fa ny vokatra sy ny olona kosa afaka mivezivezy sy miserasera.
Dominique : miady an-karona ka ho potika toa ny fasika ny FAT. Ka eto dia mila fahavononana, firaisankiana ary fihavanana isika ho fampisehona hery.
Edouard : ny ovy maniry tsy tanan’ny vato na inona na inona anaovana azy tsy maintsy maniry ny ovy tahaka ny ankolafy 3, tsy maintsy tanteraka ny faniriny. Tsy dia nisy firy ny fanekena na kiana tamin’ilay sori-dalana tany Sandton fa ny nampisavorovoro dia ny fodian’i Dada. Manana trano ireo filoha ireo ary hody satria eto no anaovana ny sonia. Ny fodiana ireo filoha roalahy ireo ihany koa no hanamarika ny fialan’i Andry.
Ho tsara io Addis Abeba io, mety famoriana miaramila iraisam-pirenena hampody ny filoha satria ny eto efa tsy vonona.
Guy Maxime : voaporofo fa nitsangatsangana i Simao teto satria nanamafy ny Sadc fa tsy irany. Diso fanantenaina ny FAT ka nody i Simao.
Niresaka i Hajo ben’ny tanana, satria amiko tsy ministra iny, fandringanana antsika ben’ny tanana tsikelikely ireny, ka andao hiaraka dieny izao fa aza matoritory. Tsy tokony atory intsony i Antananarivo. Nahavita nanaonganana i Andry ka ahoana no tsy afahantsika hanongana azy ?
Rodin : « doubleo » na « tripleo » ny « cadenas » ao an-tranonareo na dia tsy ho avy any aza I Ravalomanana sy Radidy.
Tamin’ny andron’i Ravalomanana hono no tena sahirana ny Airmad ? Sao dia mba diso satria i Ravalomanana anie no nanitatra ny airport ary nisokatra ny lanitra tamin’ireny. Fanontaniana ho anareo FAT, ahoana ny « subvention » any ambanivohitra sa tsy vita mihitsy. Nolazaina fa Ravalomanana no nangorona harena teto ary inona no hanenjahana any Edgar ao Maorisy amin’ny resaka fitsarana ?
Omena solosaina ny district, tsara izany nefa maninona no tsy ekena mihitsy ny iraisam-pirenena hijery sy hameha ny fifidianana ? I Manorohanta anie no efa hanao CIN biometrique tamin’ny 2009 nefa aiza izany ary iza no manana nefa 9 miliara ny vola.
6 sy 7 ny daty andrasana fa 30-1 tsy misy resaka Madagasikara.
Auteur Solo Razafy*Publié le 1 juillet 2011 1 juillet 2011 Catégories Politique
5 pensées sur “Tsy vitan’ny kabary sy fivoriana ny tolona fa mila asa…”
Hoy ny be kintana izay hoe:Action (avec l’accent).Rodobe ohatra io.
2 juillet 2011 à 8 h 18 min
Ny kabary anie samy mahay daholo e !
Samy miseho ho mahavita azy daholo na ketrona sy adala aza !
Fa ny hidina hanao RODOBE no tadiavina satria :
IZAY IHANY NO ANTOKA MAMPIALA NY DEVOLY !
Mazava ve sa mbola asiana resaka adala ????!
Mampiakatra tansiao hoy ny sasany !Avelao hiakatra any, fa
– adoboy ny RODOBE raha mafy, sy hendry e !
marina ny anao député Rodin o,
raha tahaka anao daholo ny mpitarika efa lasa lavitra ny ady
Ry « be karavaty – be kôstara » variana miantso mpanao gazety, miseo milay ambadikiny micro
Izany no efa ela notadiavina koa andao @ zay e , ireo TRAITRES no tena atao hazalambo voalohany ok lasa zao ary e!
2 juillet 2011 à 19 h 11 min
Reraka mihintsy aho manamboatra ny sainareo ireto kah! Mandeha io fa aza TAIRINA!
Tsy misy tokony mampikoropaka intsony!
Raha ny kabary indray no asiana resaka dia tena manampy be dia be ny fitolomana satria betsaka ny zavatra
azo raisina sy tsara ho fantatra @ ‘kabary izay mivoaka eo, amiko tsy fotsy rora mihintsy ireo olona mitatatata
eo isanandro satria tena misy zavatra tsy ampoizina ary tsara ho fantatra mihintsy voalaza eo ,indrindra
eo sisa no mba misy vao2 MARINA sy mba radio kelintsika,koa amiko tena ilaina io kabary io mba hampisokatra ny
sain’ny rehetra,manome hery ihany koa hiatrehana ny zavamisy indraindray ary tsy mbola hitako izay maharatsy azy
aloha hatra@’izay,amiko izay tsy tonga eo no tena MATIANTOKA satria isanandro dia misy lesona azo tsoahina foana
@ ‘izay voalaza eo,izaho aza mahavatra mandray NOTE isanandro mihintsy raha azo hatao.
Précédent Article précédent : Marc Ravalomanana adresse une lettre au Président namibien Hifikepunye Pohamba
Suivant Article suivant : MBOLA TSY FAY IHANY VE : Aoka izay ny kabary ESORY ANDRY R. mpikaraman’ady